"सुवासचन्द्र नेम्वाङ" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"सुवासचन्द्र नेम्वाङ" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
सुवासचन्द्र नेम्वाङ (सम्पादन गर्ने)
१९:२९, ५ अगस्ट २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन
No change in size , २ वर्ष अघि
वि. म.: हिज्जे ठीक (-कानून +कानुन)
११:०५, १२ मार्च २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
Janak Bhatta (कुरा गर्ने • योगदान)
चिनो: २०१७ स्रोत सम्पादन
१९:२९, ५ अगस्ट २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (वि. म.: हिज्जे ठीक (-कानून +कानुन))
'''सुवासचन्द्र नेम्बाङ'''को जन्म सालमा [[इलाम जिल्ला]]को [[सुन्तलाबारी]]मा भएको हो। उनले कानूनमाकानुनमा स्नातक (बीएल) गरेका छन्।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ यसअघिको व्यवस्थापिका संसदमा पनि सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यसअघि २०४८ र २०५२मा गरी उहाँले दुई पटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेदारी सम्हालिसक्नुभएको छ। २०५६को संसदीय निर्वाचनमा विजयी नेम्वाङ कानूनकानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएको छ। [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा(एमाले)]]को केन्द्रीय सदस्य र कानूनकानुन विभाग प्रमुख रहेका नेम्वाङ संविधानसभा सभासदमा इलामबाट निर्वाचित हुनुभएको हो।
कानूनकानुन व्यवसायीका रूपमा परिचित र प्राध्यापनमा समेत संलग्न रहिसकेका नेम्वाङले नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको जिम्मेदारी सम्हालिसक्नुभएको छ। उहाँ २०२९ सालमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेम्वाङ २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा जेल पर्नुभएको थियो। उहाँ [[त्रिभुवन विश्वविद्यालय]]बाट कानूनमाकानुनमा स्नातक हुनुहुन्छ। अध्ययन र समाजसेवामा उहाँको रुचि छ। उहाँका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। अघिल्लो निर्वाचन पछि जनतालाई पुर्‍याएको सेवा र जनता सँगको निकट संबन्धले आफूलाई विजयी बनाएको ठान्ने सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभामा सङ्घीय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील रहने बताउनुहुन्छ।
विद्यार्थी छँदा नै राजनीतिमा लागेका नेम्बाङ सालमा [[कम्युनिष्ट पार्टी]]मा प्रवेश गरेका हुन्। उनी [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा(एमाले)]]का तर्फबाट [[कानूनकानुन तथा न्याय मन्त्री]] बनेका थिए।
२०६४को [[संविधान सभा निर्वाचन]]मा [[इलाम जिल्ला]] क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भै [[संविधान सभा]]को अध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थयो । २०७०काे [[संविधान सभा निर्वाचन]] पछि अोनसरी घर्तिमगर [[संविधान सभा]]को अध्यक्ष हुनुभयो।<ref>[http://www.nepalcaportal.org संविधान सभा निर्वाचन पोर्टल]</ref>
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/665999" बाट अनुप्रेषित